Waa tee kooxda Frank Lampard u soo jeedisay inuu Tababare u noqdo? – Gool FM
Waa tee kooxda Frank Lampard u soo jeedisay inuu Tababare u noqdo?
Haaruun November 17, 2016
(New York), 17 Nof 2016 –Laacibkii hore ee Ingiriiska iyo Chelsea Frank Lampard oo isagu dhowaan shaaciyay inuu ka tegayo kooxdiisa New York City Bisha Decembre marka uu qandaraaskiisu dhaco ayaa waxaa haatan kooxda MK Dons ee Ingiriiska ay u soo jeedisay in uu tababare u noqdo.
Lampard ayaa sida ay ku warramayso ESPN waxa uu ku gacan seyray dalabkaasi kaddib markii ay si toos ah ula soo xiriireen mas’uuliyiinta MK Dons isagoo xusay in uu jecel yahay inuu ugu yaraan sanad kale sii wato ciyaarihiisa.
Frank Lampard ayaa isu diyaarinaya in uu dhowaan Leysinkiisa tababarenimo qaato isla markaana ku soo biiro caalamka Tababarenimada waloow ay rajo uga jirto in uu ciyaaraha ku sii jiro.
Ciyaaryahan Lampard oo 38 jir ah ayaa labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeysay ku sugnaa Mareykanka waxaana jira warar sheegaya in uu haatan aadi doono midkood LA Galaxy ama Orlando City.
Guardiola oo la xiriiray Wakiillada Daafaca PSG ee Serge Aurier
Waa maxay sababta Malaga ay u diiday saxiixa Mario Balotelli?